UltraSMSScript: API ဖြင့်ပြည့်စုံသော SMS, MMS နှင့်အသံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းကိုဝယ်ပါ Martech Zone
စာသားမက်ဆေ့ခ်ျဗျူဟာကိုစတင်ခြင်းသည်ခက်ခဲသောအကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ မယုံနိုင်ဘူးလား၊ သယ်ဆောင်သူများသည်ယနေ့ပင်လက်စွဲစာအုပ်ဖြစ်နေသည်။ စာရွက်စာတမ်းတင်ရန်၊ သင်၏ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ SMS ခွင့်ပြုချက်များအပေါ်လက်မှတ်ထိုးရန်။ ငါဒီကြားခံ၏လိုက်နာမှု၏အရေးပါမှုကိုအလေးမထားရန်ကြိုးစားနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော် SMS ဖြေရှင်းမှုတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ခြင်း၏စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများသည်ခွင့်ပြုချက်ရရှိသောတရားဝင်စျေးကွက်သမားအတွက်အတော်လေးစိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
SMS စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အတော်လေးရှုပ်ထွေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာ SMS ပလက်ဖောင်းအများစုသည်ထိုသို့ပြုကြသည် မဟုတ် SMS သယ်ဆောင်သူများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးဆက်သွယ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်သည့် SMS စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်မက်ဆေ့ခ်ျသို့ပို့ပေးသောမက်ဆေ့ခ်ျဂိတ်သို့ဆက်သွယ်သည်။
SMS ပလက်ဖောင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၎င်းတို့စနစ်လည်ပတ်ရန်အတွက် SMS message gateway ကိုမှီခိုနေရသည်။ ဈေးနှုန်းရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်သင်၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုငွေပေးချေသည်၊ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခကိုသင်၏ပလက်ဖောင်းသို့ပေးသည်၊ သော့ချက်စာလုံးများပိုမိုရရှိရန်သင်ပေးဆပ်နိုင်သည်။ SMS ကုန်ကျစရိတ်သည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သုံးစွဲသူများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန် SMS ကိုမကြာခဏလက်ခံကျင့်သုံးနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အကုန်တွင်သုံးစွဲသူ ၄၈.၇ သန်းသည်မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှ SMS ဆက်သွယ်မှုကိုလက်ခံရန်စိတ်လိုကိုယ်လျောက်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ သုံးစွဲသူများ၏ ၇၀% သည် SMS စျေးကွက်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုထင်ကြသည်။ ၈၂% သောလူတွေကသူတို့လက်ခံတဲ့စာသားမက်ဆေ့ခ်ျတိုင်းကိုဖွင့်တယ်လို့ပြောကြတယ်။
Lauren ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး, 45 SMS စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိန်းဂဏန်းများသင့်ဖောက်သည်များသင်သိစေလိုသည်
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြံ့ခိုင်။ တတ်နိုင်သည့် SMS တံခါးပေါက်အချို့ရှိပါသည်။ ၎င်းတွင်အပါအဝင်၊ အားကောင်းသည့် APIs များမှတဆင့်သင်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်အသုံးချခြင်းများပါဝင်သည်။ Twilio, Plivo, Telnyx, SignalWire, Nexmo, Ytel နှင့် Bandwidth ကို။ ဤပလက်ဖောင်းများတွင်သင် SMS ပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင်ကူညီရန်အားကောင်းသည့် APIs များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော software developer ပစ္စည်းများရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သို့သော်၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်။
UltraSMSScript: သင်၏ကိုယ်ပိုင် SMS စာတိုပေးပို့စနစ်အားဝယ်ယူပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
သင်၏ကိုယ်ပိုင် SMS စာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်းကိုဖွံ့ဖြိုးရန်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းသို့လစဉ်လိုင်စင်ကြေးပေးဆောင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်အခြားကုဒ်နံပါတ်ကိုဝယ်ယူပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်အခြေခံအဆောက်အအုံတွင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုမြန်မြန်ပြေးနိုင်စေရန်နှင့်သင်၏ platform သည်လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန်၊ UltraSMSScript သည် API ပါသောအဖြူရောင်တံဆိပ်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင် ၀ ယ်ယူပြီးတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ထို့နောက်၎င်းအတွက် SMS တံခါးများကိုအသုံးချနိုင်သည်။ ဆက်တိုက်အခကြေးငွေမရှိပါ။ သင်သည်တံခါးပေါက်တစ်ခုနှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်စဉ်ကတည်းက ပိုမို၍ တတ်နိုင်သော SMS စာတိုပေးပို့ခကိုပေးဆောင်ပါမည်။
မိုဘိုင်းကူပွန် - သင်၏ဖောက်သည်များအားပေးပို့ရန်လှပသောမိုဘိုင်းကူပွန်များဖန်တီးပါ။ သူတို့သည်သင်၏လက်ရှိဖောက်သည်များကိုလည်းအကျိုးပြုစဉ်သစ္စာစောင့်သိသောဖောက်သည်အခြေပြုတည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကူပွန်တစ်ခုချင်းစီသည်လုံးဝစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုသင်မည်သို့တပ်ဆင်လိုသည်ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေသည့်အပြင်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။
Q & A SMS Bot - အလိုအလျောက် SMS မေးခွန်းများနှင့်တုံ့ပြန်မှုများကိုဖန်တီးပါ။ သော့ချက်စာလုံးဖြင့်စာပို့ခြင်းဖြင့်စတင်မည်။ သင်လိုချင်သလောက်မေးခွန်းများကိုနံပါတ်စဉ်တစ်ခုအနေဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှု၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေ,ိများ၊ အဖိုးတန်သောတုန့်ပြန်မှုများစုဆောင်းခြင်းနှင့်သင်၏စာရင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သည်။
ငွေလွှဲပို့ခြင်း - SMS စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အဓိကအချက်မှာသင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူများထံ SMS မက်ဆေ့ခ်ျအမြောက်အများကိုပေးပို့နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အုပ်စု ၁ ခုသို့အုပ်စုများစွာသို့တပြိုင်နက်ပို့ပါ။ သင်၏မြှင့်တင်လိုသောအပေးအယူများသို့မဟုတ်လျှော့စျေးများကိုကြေငြာရန်သင်၏ဖောက်သည်များထံသို့မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ပါ၊
အကန့်အသတ်မဲ့သော့ချက်စာလုံးများ - သုံးစွဲသူများအတွက်သော့ချက်စာလုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ပါဝင်နိုင်သည်။ မိုဘိုင်းသော့ချက်စာလုံးများသည်သတ်မှတ်ထားသောစျေးကွက်တစ်ခုသို့ဆွဲဆောင်ရန်မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သင်သည်အကန့်အသတ်မဲ့သော့ချက်စာလုံးများကိုရယူသုံးစွဲနိုင်သည်။ လူများသည်သော့ချက်စာလုံးဖြင့်စာပို့ခြင်းဖြင့်သင်၏စာသားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
Bulk SMS ကိုစီစဉ်ခြင်း - မက်ဆေ့ခ်ျများကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းသည်သင့်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သင့်အကြောင်းမေ့လျော့သွားစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာမူသည်သင့်အား SMS မက်ဆေ့ခ်ျများမည်သည့်အချိန်တွင်ပေးပို့သည်ကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
autoresponder - လူတစ် ဦး သည်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းထားသူစာရင်းတွင်ပါဝင်ပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုစိတ်ကြိုက်မက်ဆေ့ခ်ျပြန်ပို့ပါ။ Autoresponders များကို email Autoresponders အလုပ်ကဲ့သို့ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောအချိန်ဇယားတွင်စာရင်းသွင်းပြီးနောက်အလိုအလျောက် SMS ပြန်ပို့ရန်လည်းအလိုအလျောက်စီစဉ်နိုင်သည်။
MMS / ရုပ်ပုံမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ - MMS သည်သင်၏အကောင်းဆုံးသောအီးမေးလ်နှင့်အရေးတကြီး SMS ကိုသင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်မှုသို့ပို့ဆောင်သည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းတိုင်းတွင် ၁၀၀% နီးပါးပွင့်လင်းနှုန်းနှင့်မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှုများဖြင့်ရုပ်ပုံတစ်ခုလုံးကိုကြွယ်ဝသောမီဒီယာဖြင့်ဆေးသုတ်ပါ။
2-Way SMS Chat - 2-way SMS chat သည်သင်သို့မဟုတ်သင်၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနအားသင်၏မိုဘိုင်းဖောက်သည်များနှင့် SMS မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။ တန်ဖိုးရှိသောတုန့်ပြန်ချက်များကိုစုဆောင်းပြီးသင်၏ဖောက်သည်များနှင့်လက်ငင်းစာတိုပို့စနစ်ဖြင့် SMS မှတစ်ဆင့်သင်၏လမ်းဖောက်မှု ၂ လမ်းရှိသည်။
အကောင့်ခွဲခွဲများ - အဖွဲ့ ၀ င်များသည်သင်ပလက်ဖောင်းအတွင်းရှိမတူညီသော modules များပေါ်တွင်အလုပ်များကိုလွှဲအပ်လို။ ၎င်းတို့အားသတ်သတ်မှတ်မှတ်အင်္ဂါရပ်များကိုသာပေးခွင့်ရှိသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ sub-account များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ထပ်တလဲလဲမက်ဆေ့ခ်ျ - ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောသတင်းစကားများကိုစီးနင်းရန်အစီအစဉ်ဆွဲရန်လိုအပ်ပါသလား။ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်နှင့်နှစ်စဉ်အဖြစ်အပျက်များနှင့်ထိုစီစဉ်ထားသည့်အဖြစ်အပျက်များ၏ကြိမ်နှုန်း (နေ့စဉ်၊ ၂ ရက်တိုင်း၊ ၅ ရက်တိုင်း၊ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ပတ်တိုင်းစသည်) ကိုသင်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နိုင်သည်။
SMS ပြိုင်ပွဲများ - SMS ပြိုင်ပွဲများကိုသင်၏လက်ရှိသုံးစွဲသူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီး၍ ၎င်းကိုသင်၏စာရင်းပြုစုရန်အတွက်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုပါ။ သင်၏ဖောက်သည်များကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်စာရင်းပြုစုခြင်းထက် ပို၍ အရေးကြီးသောအရာမရှိပါ။
မွေးနေ SMS ကိုလိုသည် - သင်၏စာရင်းကိုစာရင်းသွင်းသောအခါအဆက်အသွယ်များ၏မွေးနေ့များကိုလွယ်ကူစွာစုဆောင်းပါ။ ထို့နောက်သူတို့၏မွေးနေ့သို့မဟုတ်အချို့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်သည်သင်၏မွေးနေ့စာသားကိုအလိုအလျောက်ပေးပို့လိမ့်မည်။
Facebook ကိုပေါင်းစည်းမှု - သင်၏စာကို Facebook စာမျက်နှာသို့ဝေမျှနိုင်ခြင်း။ သင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်တွင်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများဝေမျှခြင်းအားဖြင့်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူများကိုတိုးတက်စေနိုင်သည့်သင်၏ပရိသတ်များအကြားစကားလုံးကိုဖြန့်ဝေပြီးပိုမိုပါ ၀ င်မှုတိုးမြှင့်ပါ။
Bulk SMS Delivery Stats - အောင်မြင်သောမက်ဆေ့ခ်ျများ #၊ မအောင်မြင်သောမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကြည့်ခြင်း၊ သတင်းစကားပျက်ကွက်သည့်အကြောင်းရင်းနှင့်သုံးစွဲသူအားမက်ဆေ့ခ်ျများလက်ခံရရှိရန်ပျက်ကွက်သောစာရင်းမှစာရင်းသွင်းသူများကိုဖျက်ရန်ခွင့်ပြုပါ။
အသေးစိတ်ကင်ပိန်း Analytics မှ - သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း၌သော့ချက်စာလုံးများသည်အကောင်းဆုံး၊ အသေးစိတ် SMS မှတ်တမ်းများနှင့်စာရင်းပေးသွင်းထားသူအသစ်များနှင့်စာရင်းပေးသွင်းထားသူအသစ်များကိုမည်သည့်သော့ချက်စာလုံးများဖြင့်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာရန်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုခြေရာခံပါ။
ဝဘ်ဆိုက် Signup Widgets တွေ - ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ထားသောဝက်ဘ်အခြေပြုပုံစံဖြင့် SMS စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များအားခွင့်ပြုပါ။ ၎င်းသည်စားသုံးသူအသစ်များအားဆွဲဆောင်ရန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသည်။
SMS စစ်တမ်းများ - သင်၏မဲဆန္ဒရှင်များကိုသင်ကမ်းလှမ်းသည့်အရာနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန်နှင့်အဖိုးတန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်နှင့်၎င်းတို့ထံမှသင်လိုချင်သည့်အရာနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရရှိစေရန်အတွက်မဲဆန္ဒပေးစနစ်များကိုဖန်တီးပါ။
မိုဘိုင်း splash စာမျက်နှာ Builder - မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာများကိုဗီဒီယို၊ ရုပ်ပုံများ၊ သို့မဟုတ်မည်သည့် HTML နှင့်မဆို ဖန်တီး၍ ထိုစာမျက်နှာ URL များကို၎င်းတို့၏စာရင်းသွင်းစာရင်းသို့ကြည့်ရှုလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Full-featured HTML editor နှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းသတိပေးချက်များ - ချိန်းဆိုချက်ကိုသူတို့ဖောက်သည်များမေ့သွားမည်ကိုသေချာစေရန်သင့်ဖောက်သည်များအားချိန်းဆိုမှုသတိပေးချက်များကိုစီစဉ်ပြီးပေးပို့ပါ။ သင်၏အဆက်အသွယ်ကိုရှာဖွေပြီးနောက်၎င်းတို့ထံသို့ထွက်ရန် SMS ကိုလွယ်ကူစွာစီစဉ်ပါ။
ပါဝင်သည့် link အတိုကောက် & ခြေရာခံ - သင်၏ link များကိုတိုရန်တိုတိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးသင်၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ၌စာလုံးရေများများမထည့်နိုင်သကဲ့သို့သင်၏ message သည်မည်မျှထိရောက်သည်ကိုသိနိုင်ရန် link တစ်ခုအတွက်ကလစ်မည်မျှနှိပ်သည်ကိုလည်းခြေရာခံနိုင်သည်။ တစ် ဦး ကအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနည်းနည်း tool ကို!
ဒေသခံနံပါတ်များ - အဖိုးတန်သောတုန့်ပြန်ချက်များကိုစုဆောင်းပြီးဆက်သွယ်မှုကိုဒေသတွင်းသိနိုင်သောဖုန်းနံပါတ်များမှ ၂ လမ်းသွားလုပ်ပါ။ သုံးစွဲသူအကောင့်ထဲသို့ဒေသခံနံပါတ်များပေါင်းထည့်ပါ။ ဖြန့်ဝေမှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်သို့မဟုတ်နှေးကွေးစေရန်ဖုန်းနံပါတ်များမှမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ပါ။
အီးမေးလ်သတိပေးချက်များ - သူတို့၏အီးမေးလ်သတိပေးချက်အသစ်များကို ၄ င်းတို့ဖြစ်ပျက်သည်ဖြစ်စေ၊ နေ့စဉ်အကျဉ်းချုပ်တွင်ရယူပါ။ ဒါ့အပြင်နိမ့်ကျတဲ့အကြွေးချိန်ခွင်လျှာအီးမေးလ်သတိပေးချက်များကိုရယူပါဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ဘယ်အချိန်မှာဖြည့်စွက်ရန်သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။
မက်ဆေ့ခ်ျတင်းပလိတ်များ - တူညီသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါပြောစရာမလိုအောင်အသုံးများသောသို့မဟုတ်မကြာခဏအသုံးပြုသော SMS စာတိုများကိုသိမ်းဆည်းပါ။ မည်သည့် template ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါက၎င်းကိုသင့်အတွက်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပေးပါ။
ဖုန်းမှအသံလွှင့် - အပြေးတွင်? ပြproblemနာမရှိဘူး။ သင်၏ SMS စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုရိုးရှင်းသောစာသားမက်ဆေ့ခ်ျဖြင့်ဖြိုခွဲနိုင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစီမံရန်သင်၏အကောင့်သို့ဝင်ရောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
QR ကုဒ်များ - သင်၏အွန်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းဈေးကွက်သို့သင်၏အော့ဖ်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုပေါင်းကူးရန်အတွက် QR ကုဒ်များကိုထုတ်လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ software တွင်စာရင်းပေးသွင်းသူအသစ်နှင့် web page URL QR ကုဒ်များတပ်ဆင်ထားသည်။
သင်၏အဆက်အသွယ်များကိုအပိုင်းပိုင်းပါ - ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းအပိုင်းကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏စာသားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းထဲတွင်အုပ်စုများကိုအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အဆက်အသွယ်များကိုအုပ်စုများအဖြစ်စုစည်းပေးပြီးသင်၏စာရင်းပေးသွင်းထားသူအားလုံးနှင့်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုသင့်အားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းခွင့်ပေးသည်။
အသံအသံလွှင့်ခြင်း - သင်၏အဆက်အသွယ်များသို့အသံသတင်းစကားတစ်ခုထုတ်လွှင့်ပါ။ မက်ဆေ့ခ်ျကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်စနစ်ကစာသားကိုအသံသို့ပြောင်းလဲစေမည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ MP3 ဖိုင်မှတစ်ဆင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းစကားကိုတင်ပေးလိမ့်မည်။ သင်၏အဆက်အသွယ်များကိုသင်၏ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်ဆက်နွှယ်ရန်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူစာရင်းကိုတင်ပါ - သင်ပြောင်းရွှေ့ချင်သောအခြားတစ်နေရာရာမှ opt-in SMS စာရင်းရှိပါသလား။ သင်၏စာရင်းသွင်းသူများထံမှစာများလက်ခံရရှိရန်သူတို့ထံမှသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရှိပါကသင်၏စာရင်းကိုလည်းတင်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူစေပြီ
အသံစာ / ခေါ်ဆိုမှုလွှဲပြောင်းခြင်း - စာတိုပေးပို့မှုနှင့်ခေါ်ဆိုမှုလွှဲပြောင်းခြင်းစွမ်းရည်။ သင်၏ခေါ်ဆိုမှုများကို voicemail သို့တိုက်ရိုက်သွားခွင့်ပြုပါ။ ထိုနေရာတွင်၎င်းတို့အားထိန်းချုပ်နေရာမှ၎င်းတို့ကိုနားထောင်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်ခေါ်ဆိုလိုသောမည်သည့်နံပါတ်သို့မဆိုပေးပို့နိုင်သည်။
အီးမေးလ်သို့ SMS၊ - တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်၏အွန်လိုင်းနံပါတ် (SMS သို့အီးမေးလ်သို့) တစ်ခုခုပို့သောအခါအီးမေးလ်သတိပေးချက်များရယူပါ။ ထို့နောက်သင်သည်သင်၏အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုမှထိုအီးမေးလ်ကိုတိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်နိုင်ပြီးစနစ်ကထိုအီးမေးကိုယူပြီး၎င်းတို့ထံပြန်လည်ပေးပို့ပါလိမ့်မည် (အီးမေးလ်သို့အီးမေးလ်) အလွန်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမည်နှင့်အီးမေးလ်ဖမ်းယူ - သင်၏ opt-in စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်စာရင်းပေးသွင်းသူအသစ်မှအမည်နှင့်အီးမေးလ်ကိုစုဆောင်းရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများဖြင့်၎င်းတို့ကိုမြှင့်တင်လိုပါကသင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အီးမေးလ်များကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်အမည်များကိုစုဆောင်းပါ။
Management ကိုဆက်သွယ်ပါ - သင်၏အဆက်အသွယ်များ / စာရင်းပေးသွင်းထားသူများပါ ၀ င်သည့်ဆက်သွယ်ရန်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဤနေရာတွင်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းထားသူအားလုံးကိုရှာဖွေပြီးစီမံပါ။
SMS Punch Card သစ္စာရှိမှုဆုများ - ထိုရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်မကြာခဏနေရာလွဲစက္ကူလာကြတယ်ကဒ်များကိုမေ့လျော့။ သုံးစွဲသူများကိုပျော်ရွှင်စေပြီးပြန်လာနိုင်ရန်သင်၏“ ဖောက်သည်ကဒ်” SMS ၏သစ္စာရှိမှုဆုလာဘ်များနှင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်သစ္စာစောင့်သိမှုကိုကမ်းလှမ်းပါ။
Kiosk Builder - Digital loyalty kiosk သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသော kiosk display ကိုဖန်တီးနိုင်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိဖောက်သည်များအားအသုံးပြုရလွယ်ကူသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းတို့အားမိုဘိုင်းကလပ်သို့ ၀ င်ခွင့်၊ သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်၎င်းတို့၏လက်ရှိအခြေအနေကိုစစ်ဆေးသည်။
API ကို - API မှတဆင့် UltraSMSScript ပလက်ဖောင်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုရယူပါ။ သင်၏ application ထဲသို့ UltraSMSScript API ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းကသင့်ကိုယ်ပိုင် app ထဲသို့ပလက်ဖောင်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးချဲ့ရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
အီးမေးလ်ပေါင်းစည်းမှု - အကယ်၍ အီးမေးလ်ဖမ်းယူမှုကိုဖွင့်ပါက၊ အီးမေးလ်များကို Mailchimp, aWeber, GetResponse, ActiveCampaign, သို့မဟုတ် Sendinblue စသည့်သင်အကြိုက်ဆုံးအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုသို့အလိုအလျောက်ထည့်ပါ။ အားလုံးနောက်ကွယ်မှချောမွေ့စွာကိုင်တွယ်။
အွန်လိုင်းဖက်စ် - UltraSMSScript နှင့်ဖက်စ်ဖက်စ်အကြားဖက်စ်များကိုပို့ပေးပါ။ လက်စွဲစာအုပ်၊ အော့ဖ်လိုင်းဖက်စ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးရှေးဟောင်းပစ္စည်းဟောင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေခြင်းဖြင့်၊
နှစ်ချက် Opt-in - Optional double opt-in လုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပါကလူတို့သည်မိမိတို့၏ subscription ကိုအတည်ပြုရန်“ Y” ဖြင့်တုန့်ပြန်ရန်ထပ်ဆောင်းစာတိုတောင်းလိမ့်မည်။ Double opt-in သည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ သို့သော်သင်ပို့မည့်မက်ဆေ့ခ်ျများပေါ် မူတည်၍ အခြေအနေအချို့တွင်အထူးအကြံပြုလိုသည်။
၏ encoded ဗားရှင်းသည် PHP script, သင်လိုချင်သောပုံစံနှင့်ကြည့်လိုလျှင်ပေးလိုလျှင် front-end design element များကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုရန် source code အားလုံးကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်အဓိက back-end ဖိုင်အများစုကိုစာဝှက်ထားသည်။ UltraSMSScript အသုံးပြုမှု အိုင်းယွန်း ဖိုင်တွေ encode နှင့်လိုင်စင်ရန်။ hosting ကုမ္ပဏီများသည် ioncube loader ကိုတပ်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သည်။ ioncube သည်အထိခိုက်မခံသောဖိုင်များကိုကာကွယ်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ script ၏ Level4& ULTRA အစုများအတွက် source code ၏ ၁၀၀% ကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ် script ကိုပြန်လည်ရောင်းချမည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည့်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမပြုသည့်သဘောတူညီချက်ကိုသင်လက်မှတ်ထိုးသည်။
ယခု UltraSMSScript ကိုဝယ်!
ထုတ်ဖော်: ငါဒီဆောင်းပါး၌ Affiliate လင့်ခ်အသုံးပြု။ တာပါ။
Tags: AWeberအမြောက်အများ smsခေါ်ဆိုမှုကိုလွှဲပြောင်းခြင်းsms သို့အီးမေးလ်GetResponselink အတိုကောက်ဒေသခံ sms နံပါတ်များmailchimpMMS ကိုအွန်လိုင်းဖက်စ်php script ကိုQR ကုဒ်များနေပြည်တော်sms ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုsms Autorespondersms botsms chatsms အဆက်အသွယ်များsms ကူပွန်sms သော့ချက်စာလုံးများsms kiosksms သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်sms စစ်တမ်းများsms segmentsms အီးမေးလ်ပို့ရန်sms ဝစ်ဂျက်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအသံစျေးကွက်အသံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းအသံစာပို့